Budata ESET NOD32 Antivirus 2021 maka Windows
Budata ESET NOD32 Antivirus 2021
Free Budata maka Windows (55.00 MB)
Budata ESET NOD32 Antivirus 2021,
ESET NOD32 Antivirus 2021 bụ mmemme antivirus dị elu nke na-echebe ndị na-agba ọsọ, ransomware na phishing. Ọ na - egosipụta ọdịiche dị iche na mmemme antivirus ndị ọzọ na ọ na - echebe site na ụdị malware niile, gụnyere nje, ikpuru, spyware, ransomware, ma na - ejigide ezigbo nchekwa na - enweghị usoro, igbochi mmelite sistemụ na iwe iwe mgbe ị na-egwu egwu. egwuregwu ma ọ bụ na-agba ọsọ na ngwa na ihuenyo. Nwere ike pịa bọtịnụ Download ESET NOD32 Antivirus dị nelu iji nwalee ESET NOD32 Antivirus 2021, otu nime mmemme antivirus kacha mma, nefu maka ụbọchị 30.
ESET NOD32 Antivirus Nkọwa
Ihe nrite nke ESET, antivirus antivirus NOD32 Antivirus, nke na-eji teknụzụ kachasị elu dịka ọgụgụ isi, mmụta igwe, usoro aha njirimara igwe ojii, ma jisie ike bụrụ otu nime ụlọ ọrụ kacha mma na ụlọ ọrụ ahụ site na ịnata onyinye site na nnwale onwe ha. ụlọ ọrụ, ka emepụtara na mbipụta 2020. Ihe ohuru na ESET NOD32 Antivirus bu ihe ntughari nke UEFI, nke nenye nchedo megide malware nke nacho ibanye na sistemụ tupu Windows ebido, yana mkpesa nche kwa ọnwa, nke nenye ozi banyere ihe iyi egwu achọpụtara, ebe nrụọrụ weebụ egbochiri, kwụsịrị ozi ịntanetị spam, gbochie ohere webcam nweta. na ọtụtụ ndị ọzọ.
ESET NOD32 Antivirus 2021 Atụmatụ
Akụkọ mgbe ochie NOD32 Antivirus: Na-echedo gi megide ụdị malware niile, gụnyere nje, ransomware, ikpuru na spyware.
Nchekwa mmeri: Ndị nyocha nọọrọ onwe ha tinye ESET netiti ndị kachasị mma na ụlọ ọrụ ahụ. A na-ahụkwa ya na ndekọ ndekọ nke onyinye VB100 Virus Bulletin.
Na-eji obere kọmputa arụ ọrụ: Nwee ike zuru oke nke kọmputa gị. Kpọọ, rụọ ọrụ na sọfụ weebụ na-enweghị nwayọ nwayọ.
Teknụzụ na-egbutu: Mmụta Igwe Igwe, Advanced DNA, nchọpụta igwe ojii yana sistemụ aha igwe ojii bụ ụfọdụ nime ngwaọrụ kachasị ọhụrụ etolitere na ESET 13 R & D.
Akwụsịghị egwuregwu na vidiyo: Enweghị mmelite sistemụ ma ọ bụ mmapụta na-akpasu iwe mgbe ị na-egwu egwuregwu ma ọ bụ na-eme mmemme na ọnọdụ ihuenyo zuru oke.
Antivirus na Antispyware: Na - enye nchedo proactive na ụdị egwu dị nịntanetị na offline na - egbochi malware ịgbasa ndị ọrụ ndị ọzọ.
Anti-Phishing: Na-echebe nzuzo gị na ihe bara uru megide webụsaịtị webụsaịtị na-ewe ozi dị nro dịka aha njirimara, okwuntughe ma ọ bụ nkọwa ụlọ akụ, ma ọ bụ gbasaa ozi adịgboroja sitere na isi iyi ama ama. Na-echebe gị pụọ na mwakpo homoglyph (na-agbanwe agbanwe odide na njikọ)
Advanced Machine Learning (Enwekwuola): Nchọpụta DNA na usoro aha igwe ojii bụ ụfọdụ nime ngwaọrụ kachasị ọhụrụ etolitere na ESET 13 R & D.
Na-erigbu Onye Na-egbochi: Na-egbochi mwakpo ma wepụ ihe mkpuchi mkpọchi na ransomware nke ezubere iji zere nchọpụta antivirus. Ọ na-egbochi ọgụ megide ihe nchọgharị weebụ, ndị na-agụ PDF, na ngwa ndị ọzọ, gụnyere sọftụwia dabeere na Java.
Advanced Memory nyocha: Nye elu nchọpụta nke persistent malware na-eji otutu nígwé nke izo ya ezo zoo ya ọrụ.
Cloudgwé ojii-Kwadoro na Nyochaa: Na-agba ọsọ nyocha site na ịchacha faịlụ gị dị mma dabere na nchekwa data aha njirimara ESET Live Grid. Na-enyere aka ịkwụsị ihe malware na-amaghị nke ọma dabere na omume ya site na iji ya tụnyere usoro aha ojii nke igwe ojii.
Nyochaa Mgbe ing na-ebudata faịlụ: Na-ebelata oge nyocha site na ịpị ụdị faịlụ ụfọdụ, dị ka faịlụ nchekwa, noge usoro nbudata.
Idle State Scan: Na - enyere usoro aka site na ime nyocha miri emi mgbe ị na - ejighi kọmputa gị. Ọ na - enyere aka ịchọpụta ihe egwu na - anaghị arụ ọrụ tupu ha emerụ ahụ.
Ngwaọrụ Njikwa: Na-egbochi ịrizedomi ikike nke data nkeonwe gị na ngwaọrụ mpụga. Na-enye gị ohere igbochi mgbasa ozi nchekwa (CD, DVD, osisi USB, ngwaọrụ nchekwa disk). Na-enye gị ohere igbochi ngwaọrụ ejikọrọ na Bluetooth, FireWire, na ọdụdụ / myirịta ọdụ ụgbọ mmiri.
Nchịkọta Mgbochi Intrusion nke Ndị ọbịa (HIPS) (Emeziwanye): Na-enye gị ohere ịhazi omume nke usoro ahụ nụzọ zuru ezu, na-elekwasị anya na nchọpụta omume. Na-enye nhọrọ ịtọ iwu maka osisi, usoro ọrụ, yana mmemme iji mee ka ọnọdụ nchekwa gị dị mma.
Nchedo Ransomware: Na-egbochi malware nke na-agbachi data nkeonwe gị wee gwa gị ka ịkwụ ụgwọ ihe mgbapụta iji kpọghee ya.
Ihe nyocha UEFI: Na-enye nchebe pụọ na egwu na-awakpo kọmputa gị tupu Windows amalite ọbụna na sistemụ nwere usoro interface UEFI.
WMI nyocha (ỌH NEWR)): Nchọgharị maka isi mmalite maka faịlụ nje ma ọ bụ malware agbakwunyere dị ka data dị na Windows Management Instrumentation, usoro ngwaọrụ na-ejikwa ngwaọrụ na ngwa na gburugburu Windows.
Usoro nyocha nyocha (ỌH NEWR)): Nchọgharị maka faịlụ ndị bu nje ma ọ bụ isi mmalite nke malware agbakwunyere dị ka data dị na Windows System Registry, nchekwa data hierarchical nke na-echekwa ntọala dị ala maka sistemụ arụmọrụ Microsoft Windows na ngwa ndị ahọrọ iji ndekọ.
Obere Ojiji Mpaghara: Na-edowe arụmọrụ dị elu ma na-agbatị ndụ ngwaike. Ọ na-agbanwegharị na gburugburu ebe obibi ọ bụla. Ọ na-echekwa ịntanetị bandwidth na obere mmelite nchịkọta.
Ọnọdụ Gamer: ESET Smart Security Premium na-akpaghị aka na ọnọdụ ịgbachi nkịtị mgbe mmemme ọ bụla na-agba ọsọ na ihuenyo zuru oke. Mmelite sistemụ na ọkwa na-egbu oge iji chekwaa akụrụngwa maka egwuregwu, vidiyo, foto ma ọ bụ ngosi.
Nkwado PC a na - ebugharị: Na - edobe mmapụta niile na - adịghị arụ ọrụ, mmelite, na mmemme na - eri sistemu iji chekwaa sistemụ sistemụ, yabụ ị ga - anọ na ntanetị ma kwụsịkwa.
Otu Pịa Ngwọta: Na-enye gị ohere ịlele ọnọdụ nchedo gị ma nweta ngwaọrụ ndị a na-ejikarị eme ihe na ntanetị niile. Ọ awade keukwu, otu-click ngwọta nsogbu nwere.
Nwelite ngwaahịa na-enweghị nsogbu: Nweta teknụzụ nchebe ọhụụ ozugbo ha bịara dị maka ọkwa nchekwa dị elu.
Ntọala maka ndị ọrụ dị elu: Na-enye ntọala nchekwa zuru ezu iji gboo mkpa gị. Na-enye gị ohere ịkọwapụta omimi nyocha dị omimi, nyochaa ọzọ.
ESET SysInspector: Ngwá ọrụ nyocha nyocha dị elu nke na-ejide ozi dị oke egwu site na nchekwa na nsogbu nnabata.
Nkwupụta Nchedo: ọkwa kwa ọnwa banyere etu ESET si echebe gị (achọpụtara egwu, achọpụtara ibe weebụ, spam)
Ngwá ọrụ ndị ọzọ bara uru
Na-arụ ọrụ na-enweghị mbibi usoro arụmọrụ.
Ọ na-enye nkwado asụsụ English.
Multi-layered nchebe megide malware
ESET NOD32 Antivirus 2021 Ụdịdị
Nha faịlụ: 55.00 MB
Kacha ọhụrụ na: 11-07-2021
Universal Ad Blocker bụ ihe mgbochi mgbasa ozi na -enye ohere ka ndị ọrụ gbanyụọ mgbasa ozi na...
Ngwa mwepụ Junkware bụ ngwa bara uru yana ntụkwasị obi nke na -enyocha kọmputa gị maka malware,...
PrivaZer bụ mmemme mara mma nke na -echekwa nchekwa kọmputa gị ma na -emeziwanye ọsọ ya site na...
PenyuLocker bụ mmemme izobe faịlụ kpam kpam nefu na nke mebere nke ọma maka ndị ọrụ Windows. Site...
Sisma bụ ngwa njikwa paswọọdụ siri ike ị nwere ike iji na kọmputa desktọọpụ gị. Site na Sisma, ị...
Emebere megide malware na nje, Dev Secure na -echebe anyị ozugbo na ọta nchekwa megide ngwaọrụ...